Ehiopia oo kordhinaysa kharashka ku Baxa Ciidanka Milatariga – Rasaasa News
Ehiopia oo kordhinaysa kharashka ku Baxa Ciidanka Milatariga
Mar 21, 2011 Ehiopia oo kordhinaysa kharashka ku Baxa Ciidanka Milatariga, Ethiopia oo kordhinaysa kharashka ku baxa ciidamada milatariga ee dalka, iisal wasaaraha Ehiopia maalintii Sabtida ahayd, maalmo ka dib markii Addis Ababa ku hanjabtay in ay talaabo ka qaadi doonto, si ay isaga badbaadiso hujuunka cadowgeeda, sidaasi waxaa sheegay Ra
Ethiopia oo kordhinaysa kharashka ku baxa ciidamada milatariga ee dalka, si ay isaga badbaadiso hujuunka cadowgeeda, sidaasi waxaa sheegay Ra,iisal wasaaraha Ehiopia maalintii Sabtida ahayd, maalmo ka dib markii Addis Ababa ku hanjabtay in ay talaabo ka qaadi doonto xukuumada Eritrea.
R/wasaaraha Itobiya Meles Zenawi, ahna taliyaha guud ee ciidanka difaaca qaranka ma uusan cadayni inta uu noqon doono koradhaka kharashka ciidanka.
Hogaamiyaha Itobiya waxaa uu ku celceliyay mar uu la hadlayey saraakiil sare oo ciidanka milatariga ah, xarunta kuleejka taliska difaaca iyo shaqaalaha ee Ethiopia, halkaas oo uu shahaadooyin ku siinayey xubno ciidan oo qalinjabiyey.
“Marka aanu ku dadaalayno horumarka iyo nabada dalka, waxaanu ognahay in ay dawlda Eritrea ku mashquulsan tahay sidii ay dalkeena ugu burburin lahayd kooxo ay uruurisay” sidaa waxaa yidhi R/wasaaraha Itobiya.
“Si aanu uga difaacno dalkanaga cadow soo weerara, una adkayno koritaanka horumarka dhaqaale ee socda, waa in aanu kordhinaa kharashka ciidamada difaaca ee milatariga” ayuu yidhi Zenawi.
Dawlada Itobiya waxay dib u xoojinaysaa ciidameeda difaaca, waxaa kale oo ay abuuraysaa xarumo cusub oo ciidan iyada oo ku qalabaynaysa tignoolajiyo casri ah oo la socta wakhtigan. Si uu ciidanku u noqdo mid leh awood dhab ah oo horumarsan. Waxaa uu waydiistay ciidanka xooga in ay xoojiyaan masuuliyada ka ilaalinta dadka iyo dalka.
Eritrea iyo Ethiopia waxaa dhaxmaray muran xudoodeed oo aan wali xal loo helin, in kasta oo ay saxiix nabadeed oo dhexmaray lagu dhameeyey dagaal socday laba sanadkii 200, kaas oo lagu dilay 70,000 oo ruux.
Tan iyo xiligaas ka dib., waxay is dhaafsanayeen labada dal is eedayn iyo in ay mid waliba soo taageerto koox ka soo horjeeda si ay u carqaladeeyaan nabada iyo iyo amaanka.
Arbacadii ina dhaaftay dawlada Ethiopia, waxay u digtay dawlada ay dariska yihiin ee Eritrea in ay joojiso, waxay Ethiopia ugu yeedhay argagixiso ay Caasmara soo hubaynayso, oo ay doonayso in ay Ethiopia kaga dhigto Bagdad.
Saraakiil Ethiopian ah ayaa ku goodiyey in ay qaadi doonaan talaabo milatari, hadii ayna Qaranka bada cas joojin dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah Ethiopia.
Ethiopia mudo dheer ayey ku ashakataynaysay Eritrea weraro argagixiso oo ka dhacay dalka Ethiopia, ashkatooyinkaas oo Caasmara ay beenisay. Saraakiisha Eritrea wali ma ayna ka hadlin ashkatadan ugu dambaysay ee Ethiopia.
Ma Runbnaa in Dr. Axmed Sheekh Muxumed ka Tagay Degaanka Somalida?
Wardoonka Eritrea oo Lagu Arkay Meelo ka Mid ah Gabalka Shabeele